Miezaha mampifandray ny blueberry LEGO Boost rehefa tsy mifanaraka izy - Ikkaro
firosoana >> kilalao >> Tsy hampifandray Bluetooth i LEGO Boost
Ny olana lehibe sendra ahy amin'izao fotoana izao Robot LEGO Boost dia ny hoe miankina amin'ny fitaovana (takelaka na finday avo lenta) dia sarotra be ho an'ny Bluetooth ny mampiaraka. Raha ny amiko dia mandeha tsara amin'ny BQ Aquaris X Pro izy io, ary ratsy amin'ny Huawei T5 sy amin'ny Samsung A7.
Rehefa mandroso ny efijery fivorian'ny Lego isika dia tonga ny fotoana tsy maintsy hizahantsika toetra ilay robot ary hahafahantsika manao programa miaraka amin'ireo sakana tsy maintsy ampifandraisina amin'ny alàlan'ny Blue Bluetooth. Amin'ny voalohany Tokony ho mora toy ny fanindriana ny bokotra maitso eo amin'ny Hub Hub izay sakana lehibe amin'ny Robot.
Fa rehefa tonga ny manosika hanosika, dia matetika no sarotra ny raharaha.
Rehefa avy nandalo fitsapana betsaka dia toa izany Nahita fomba iray mandeha tsara aho ary izany dia hisakana antsika tsy handany fotoana hanandrana hifanaraka sy hiafara amin'ny hozatra.
Ho ahy miasa ho ahy 100% amin'ny fotoana izany. Mamela horonantsary aho ary avy eo ny lesona voasoratra amin'ny dingana amin'ny endrika nentim-paharazana.
Izaho no namorona a Torolàlana hahafantarana an'i Hub Hub amin'ny halaliny
Ahoana ny fampifandraisana ny bluetooth an'ny takelaka na smartphone amin'ny LEGO Boost Move Hub
Vahaolana tsikelikely ho an'ny rehefa tsy mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth ianao
Mivoaha ny fampiharana Lego Boost.
Esory ny Bluetooth an'ny takelaka.
Ampidiro eo amin'ny efijery efa navelanao teo aloha ny fampiharana.
Hilaza aminao izy fa mila mampihetsika ny blueberry ny takelaka ianao hidirana
Tsindrio ny bokotra maitso ao amin'ny Hub Hub
Misafidy sy mampihetsika izany safidy izany amin'ny takelaka ianao ary manaiky alalana
Ary voila, mifandray avy hatrany ianao.
Ho fantatrao raha toa ka mifandray izany satria lasa manga ny Blue hub. Amin'ity sary manaraka ity dia tsiroaroa. Jereo ny nitarina
Tsy misy PIN
Alohan'ny nahitako ny fomba etsy ambony dia nanandrana nampifandray ny Boost sy ny tablette mivantana tamin'ny alàlan'ny safidiko Bluetooth tablet aho. fa rehefa manandrana manambatra azy ireo ianao dia mangataka PIN.
Saingy, tsy misy izany PIN izany, nanandrana ireo izay matetika ampiasaina 0000, 1234, sns aho fa tsy misy na inona na inona ary avy eo mitady fampahalalana amin'ny tranokala LEGO ofisialy dia mampitandrina izy ireo fa tsy afaka mampifandray izany aminay isika satria tsy PIN izany misy.
Momba ny LEGO Boost
Raha te hahita Inona ny atao hoe LEGO Boost aza adino ny fiheveranay.
Robot namboarina ho an'ny ankizy izy io. Nanaitra ahy tsara aho, nieritreritra aho fa ho voafetra kokoa izany, saingy noho ny Scratch no nanamora ny fizarana fandaharana ary noho ny fiarahana amin'ny LEGO dia afaka manova mora foana ny Robot isika.
Tao amin'ny bilaogy noresahintsika indraindray robot vita amin'ny Arduino saingy tsy dia tia ankizy loatra izy ireo. Ity iray ity dia natambatry ny zanako vavy 6 taona fotsiny ary nanomboka nandahatra fandaharana niaraka tamin'ny sakana iray manaraka ny torolàlana momba ilay fangatahana.
Raha mieritreritra ny hanana iray ianao eto dia azonao atao ny mividy azy.
Mamela famerenana Boost feno aho mandra-piandry fa ity lahatsoratra ity dia natao hamahana ny olan'ny Bluetooth.
Ary farany, raha mpamorona sy / na mila fampahalalana ara-teknika momba ny rindrambaiko Bluetooth ianao dia afaka mankany aminy ny Lego Boost github izay misy fampahalalana marobe. Amin'ny fotoana anoratana dia mampiasa LEGO Wireless Protocol 3.0.00 izy ireo
Ary ity hahalalana bebe kokoa momba Bluetooth
Hevitra 2 momba ny "LEGO Boost tsy mampifandray Bluetooth"
16 Aogositra 2021 amin'ny 9:08 maraina
Ity manaraka ity dia niasa ho ahy:
1. Vonoy ny Hub Lego Boost.
2. Sokafy ny fampiharana ary safidio ny safidy hampiarahana ny Hub.
3. Rehefa maty ny Hub, tsindrio ny lakilen maintso ary tazony mandritra ny 10 segondra mandra-pahazoan'ny jiro mena manjelatra.
4. Ny safidy hanavao ny Firmware dia hiseho ao amin'ny App.
Vonona hampiasa ianao amin'izay.
25 Aogositra 2021 amin'ny 8:05 hariva
Misaotra betsaka amin'ny fanampianao. Namboariko fotsiny ny fanomezana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanako lahy izay tsy nifandray. Mpamonjy aina ianao x
1 Ahoana ny fampifandraisana ny bluetooth an'ny takelaka na smartphone amin'ny LEGO Boost Move Hub
2 Tsy misy PIN
3 Momba ny LEGO Boost
4 dia midika hoe